မိမိကိုယ်မိမိ တာဝန်မကျေဟု ယူဆသဖြင့် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ရခြင်းဖြစ်ဟု ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးဟောင်? - Yangon Media Group
မိမိကိုယ်မိမိ တာဝန်မကျေဟု ယူဆသဖြင့် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ရခြင်းဖြစ်ဟု ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးဟောင်?
”ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာ က အချက်သုံးချက်ရှိပါတယ်။ ပထမအချက်က ကျွန်တော့်အမျိုး သမီးနဲ့ အဆင်မပြေဘူး။ ဒုတိယအချက်က မိသားစုကိစ္စပေါ့ အစ်ကို တွေ၊ အစ်မတွေနဲ့အဆင်မပြေဘူး။ တတိယအချက်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားမရဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်တာဝန်မကျေဘူးလို့လည်း ယူဆမိတာပေါ့။ တခြားတော့ ဘာကိစ္စမှမရှိပါဘူး။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက် ပြီး ဆဲဗင်းဒေးမှာပါလာတဲ့ ဖူဆယ်ကွင်းကိစ္စ ငွေတောင်းတာကို ဝန် ကြီးချုပ်ကငွေချမပေးလို့ စိတ်ဆိုး ပြီး နုတ်ထွက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီသတင်းက မှားနေပါတယ်။ သမ္မတကြီးကလည်း မှာကြားထားတာရှိပါတယ်။ ရာထူးတွေရပြီးရင် အဆောင်အယောင်တွေနဲ့ ယစ်မူး မနေကြဖို့ မှာထားတာနဲ့အညီ ပြီးခဲ့တဲ့ မေ၂၁ရက်မှာ ကျွန်တော့်အဆောင် အယောင်ပစ္စည်းအားလုံးကို ပြည် နယ်အစိုးရကို ပြန်လည်အပ်နှံ ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
တာဝန်လွှဲပေးဖို့ တော့ ကျန်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကလည်း သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာ တွေနဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအ ဝေးတွေနဲ့ ကျွန်တော်လုပ်ထားကိုင်ထားတာတွေ လက်စမသတ်ရသေးတဲ့အတွက် အချိန်အနည်းငယ်ပေးဖို့ တင်ပြထားပါတယ်။ သတင်းမီ ဒီယာတွေကိုပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်နုတ်ထွက်ရခြင်းဟာ ဘာ အကြောင်းမှမဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော့် ရဲ့မိသားစုအခြေအနေကြောင့် နုတ်ထွက်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အများသိစေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ အခု လိုတွေ့ဆုံပြောကြားတာပါ”ဟု ကရင်ပြည်နယ် ဗမာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဟောင်း ဦး တေဇထွဋ်လှိုင်ထွေးက သတင်းမီဒီယာများကို ပြောသည်။
ကရင်ပြည်နယ် ဗမာတိုင်းရင်း သားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဦးတေဇထွဋ်လှိုင်ထွေးအား ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ အမိန့်အမှတ် ၂ဝ/ ၂ဝ၁၉၊ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် မေ ၂၃ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခွင့် ပြုလိုက်ကြောင်းသိရသည်။